Sony nzo ozo na vinyl records | Akụkọ akụrụngwa
Ruo oge ụfọdụ, ọ dị ka ejiji ochie na-abịa ma na-ala. Ihe niile ochie dị jụụ. Na otutu. Afọ ole na ole gara aga, ọtụtụ bụ ndị ọrụ bidoro nyochaa uwe mwụda ha ọtụtụ iri afọ gara aga, wee laghachi n'iji uwe, jaket na uwe ndị sitere na afọ 70 na 80. Cassettes ahụwokwa etu ha sirila laghachi na ndụ, dị ka ihe ndị a na-eme na kọmputa. ndị Nintendo Classic Mini. Ugbu a ọ bụ ihe ndekọ vinyl.
Sony abụrụla ụlọ ọrụ izizi kwuputara na ọ ga-eresị egwu n'ụdị a ọzọ maka ọganiihu ahịa ha nwere n'afọ abụọ gara aga. Sony kwụsịrị ịrụ ọrụ n'ụdị a na 1989 mgbe CD malitere ịbụ ngwaọrụ kachasị amasị ndị ọrụ mgbe ịzụrụ egwu.
O doro anya na Sony chọrọ iji ohere ọ bụla dị na teknụzụ niile dị n'ahịa ahụ gbalịa iwepụrụ ha ọ bụghị naanị ịmepụta vinyls, kamakwa ọ chọrọ ịkwalite ogo nke otu ihe ahụ enwere ike na maka nke a naị na-achọ ndị injinia ijikwa okwu a. N'oge ahụ ọ dị ka mba dị iche iche ga-amalite ịmalite ụdị egwu a na Japan, yana egwu ọdịnala sitere na mba ahụ.
Japan abụrụla otu n'ime ahịa kachasị maka usoro a, ebe akụkọ ifo HMV nwere ala anọ ebe anyị nwere ike ịchọta egwu niile anyị nwere ike ịchọrọ yana n'ụdị ọ bụla. Fashiondị ejiji a abụghị naanị ihe na-adọrọ adọrọ, mana ọtụtụ ndị na-eto eto na mba ahụ nwere mmasị na vinyl, ihe na afọ ole na ole gara aga, mgbe ewepụtara CD ahụ, agaghị ekwe omume iche.
Ọ ga-abụ fad? A ga-ejikwa uwe ogologo ọkpa mee ihe ejiji n'oge gara aga?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Sony nzo ozo ozo na vinyl records
WiFilọ ndò WiFi n'efu na-abịa London